६ महिने शिशुको मृत्यु घटना थप रहस्यम: खा ल्डो ख’न्ने ब्यक्ति मिडियामा आएर खुलाए सबैकुरा, जडिबुटी भनेर बि ष खु’वा इयो !(भिडियो हेर्नुस्) – Dailny NpNews
६ महिने शिशुको मृत्यु घटना थप रहस्यम: खा ल्डो ख’न्ने ब्यक्ति मिडियामा आएर खुलाए सबैकुरा, जडिबुटी भनेर बि ष खु’वा इयो !(भिडियो हेर्नुस्)
प्रकाशित मिति: आइतबार, फाल्गुण २३, २०७७ समय: १९:१३:५५
काठमाडौ । सरस्वती सिग्देल होस्टल बसेर नवलपरासीको कावसोतीमा कक्षा १० मा पढ्दै थिइन । बुबाको नि ध न पछि सरस्वतिलाइ बुबाकै माया दिएर दाजु दुर्गानाथ सिग्देलले हुर्काए अनि बढाए, पढाए अनि लेखाए । नवलपुरकै गणेश भण्डारीले सरस्वतिलाइ प्रेम प्रस्ताव राखे ।
गणेश सरस्वति भन्दा कान्छा थिए । सरस्वतिले प्रेम प्रस्ताव अस्विकार गरिन तर गणशले उनलाइ पिछा छाडेनन । हैरान भएपछि सरस्वतीले गणेश सँग प्रेम गरिन । प्रेम झाँगिदै गयो । बिचबिचम उनीहरुबिच बिछोड हुँदै मिलन हुँदै गर्ने क्रम चलिरह्यो । त्यसपछि दुवैले विवाह गर्ने निधो गरे ।
गणेश घरको एक्लो छोरा थिए । त्यसकारणले सरस्वतीले उनलाइ सहजै बुहारि स्विकारेनन । विवाहको केहि महिनामै सरस्वती गर्भवती भइन । त्यसपछि गणेशको परिवार पनि बाध्य भयो । गणेशले सरस्वतीलाइ दिनहु जसो शारिरिक तथा मानसिक त ना व दिन थाले । तर प्रेम भएकोले सरस्वतीले माइतीमा सुनाउन सकिनन । विवाहको डेढ बर्षपछि उनीहरुको बच्चा भयो । त्यसपछि सुरु भयो सरस्वतीलाइ सुरु भयो घरबाट निकाल्ने योजना ।
सरस्वतीको अनुसार ६ महिने बालिका सि ध्या एर उनलाइ घरबाट निकाल्ने योजना गणेशको परिवारको थियो । योजना अनुसारनै उनको श्रीमान ससुरा र सासुले घटना गराएको सरस्वतीको आ रो प रहेको छ ।
मृ त्यु रहस्यमय अझै यसरी पनि हुन गयो कि घरकै छेउछाउमै एउटा खा ल्डो समेत ख निएको थियो जुन लगभक १ हात गहिरो र चारजना मान्छेको समुहले ख न्दै गरेको प्रत्यक्षदर्शीले देखेको बताउछन् । यो खा ल्डो ख नियो ताकि ती नाबालिकालाई माञरि सकेर यहि खा ल्डोमा गा ड् न सकियोस् ।छिमेकि र आफन्तजनले यहि आ रोप लाउदै आएका छन् ।
४९९ पटक हेरिएको